DialogTech: Kufona Attribution uye Shanduko Ongororo | Martech Zone
DialogTech: Kufona Attribution uye Shanduko Ongororo
Chitatu, Kurume 30, 2016 Chitatu, Kurume 30, 2016 Douglas Karr
Pamberi pemafoni efoni uye nhare mbozha, apo kushambadzira kwedhijitari kwaive zana muzana desktop, kupihwa kwaive nyore. Mutengi akabaya kushambadziro yekambani kana email, akashanyira peji rekumhara, uye akazadza fomu kuti ave anotungamira kana kupedzisa kutenga.
Vashambadziri vanogona kusunga izvo zvinotungamira kana kutenga kune chaiyo yekushambadzira sosi uye nekunyatso kuyera kudzoka pane kushandisa kune yega mushandirapamwe uye chiteshi Ivo vaingoda kuti vaongorore zvese zvinobata kuti vaone kukosha kwechiteshi chimwe nechimwe, uye ivo vaigona kukwidziridza kukanganisa kwavo pamari nekudyara mune zviri kushanda uye kubvisa izvo zvisiri. CMO inogona zvakare kuchengetedza nechivimbo bhajeti yavo kune CEO nekuratidzira kukanganisa kwayo pamari.
Asi mune yanhasi nharembozha yekutanga-nyika apo vazhinji uye vazhinji vatengi vanoshandura nekufona, kupihwa kune kwakawanda kunetsa - kwete chete mukuziva kunobva iko kufona, asi kwemhedzisiro inoguma futi. Aya mabhirioni efoni yemwedzi nemwedzi anowira kunze kwekutarisa kwakawanda maturusi ekushambadzira, achigadzira hombe nhema nhema mune yekushambadzira yekupa data vatengesi vanovimba nekuratidzira ROI nekuvandudza mari yemari. Iyi data pamusoro pekushandurwa kuburikidza nekufona inorasika zvachose. Iyi data inogona kusanganisira:
Kushambadzira sosi yekufona: Ndeipi nharembozha, yedhijitari, kana isingaenderane chiteshi yakadzinga kufona - kusanganisira kushambadza, mushandirapamwe, uye kutsvaga kwemazwi - uye chero mapeji ewebhu uye zvemukati pane yako saiti uyo anofona anoonekwa asati uye mushure mekufona.
Caller data: Ndiani ari kufona, nhamba yavo yefoni, nzvimbo yavanogara, zuva uye nguva yekufona, uye nezvimwe.
Rudzi rwekufona: Chii chaive chinangwa chemunhu aifona - yanga iri yekufona yekutengesa kana imwe mhando (rutsigiro, HR, kukumbira, kutsausa, nezvimwewo)?
Fona mhedzisiro uye kukosha: Kwakafambiswa kufona, kurukurirano yakatora nguva yakareba zvakadii, zvakataurwa parunhare, uye kana iko kufona kuchinjirwa kumukana wekutengesa kana mari (uye saizi kana kukosha kwemukana).
Kupa kwekufona ndiko kunetsa kunetsa kuri kutarisana nevashambadzi vanotyairwa nedata nhasi. Pasina iyo, vatengesi havagone kuyera chaizvo kushambadzira ROI uye kugadzirisa mari kune izvo chaizvo zvinotyaira zvinotungamira uye mari. Pamusoro pezvo, vashambadziri havakwanise kudzivirira nechivimbo bhajeti kune CEO. Muchidimbu, gomba dema rinoisa zvikwata zvekushambadzira pasi pekumanikidza kwekudzivirira kukosha kwazvo uye zvinodhura vatengi vemabhizinesi.
“Kufona kuri mukati ndeimwe yeakasimba ekutenga zviratidzo parwendo rwevatengi. DialogTech inogonesa makambani ekushambadzira emakambani nemasangano kukwidziridza macampaign edhijitari ekufona kwevatengi vachishandisa nzira imwechete yemartech nemaitiro avanoshandisa kubaya. ” - Irv Shapiro, CEO, DialogTech
DialogTech inoshanda seyehukama mudyandigere kune anopfuura zviuru zvishanu mabhizinesi, vamiririri, uye makambani anokura nekukurumidza pamhando dzakasiyana maindasitiri. Vatengi varipo vanosanganisira Ben & Jerry's, HomeFinder.com, Comfort Keepers, Terminix, nematatu ekumanikidza ekushandisa mashandiro ari F5 Midhiya, HotCorp, uye Kurara Chitima Matiresi Centres.
Vachishandisa inoshanda yekufona yekutevera pamwe nekupihwa uye kutendeuka kuteedzera, vashambadzi vanogona kukwidziridza AdWords neBing yekutsvaga mishandirapamwe kuti vatyaire kwete chete mamwe mafoni, asi akawanda vatengi nemari.
Shandisa Keyword-Chikamu Kufona Kuchengeta Kuti Uratidze uye Kuvandudza ROI: Nzwisisa chaizvo mashandisiro aunoita ekutsvaga ekutsvagisa mafoni, uye wozogadziridza mazwi akakosha, kushambadza, mapeji ekumhara, nzvimbo, uye mazuva / nguva dzinotyaira zvakanyanya (uye zvakanakisa) mafoni evatengi.
Nzira Dzinosheedzera Kubva paKufona Dhata Yekutevera: Shandisa data rekutevera rekufona rakatorwa panguva yekufona kuendesa wega wega wekufona zvakaringana, uchivaendesa kumunhu akanakisa kuti avashandure vatengese. Kufona kuendesa tekinoroji kunogona kuendesa vafonesi munguva chaiyo zvichibva pane dzakasiyana siyana sarudzo, kusanganisira yekushambadzira sosi (mazwi akakosha, shambadziro, uye peji rekumhara), nguva uye zuva, nzvimbo yemunhu anenge afona, uye nezvimwe.
Ongorora Kukurukurirana Kuvandudza PPC: Shandisa hurukuro analytics tekinoroji kuti uone kana vakabhadharwa vekutsvaga vakashandisa muswe wako murefu kana mamwe mazwi akakosha, marondedzero avanoratidza mapoinzi uye mhinduro dzavanofarira, nezvimwe. Unogona kushandisa ruzivo irworwo kuwedzera kana kutsvagisa rakanangana nekiyi kutarisisa uye kugadzira kushambadzira uye kumisikidza peji kutumira meseji kuti ibudirire.
Chikuva cheDialogTech chinogadzirisa rimwe rematambudziko anonetsa munyika yanhasi yekutanga-nhare nekubvisa gomba dema mukutengesa data rekuita kubva kune inbound mafoni. Sezvo vashambadziri vakatarisana nekumanikidzwa kwekutyaira kwete kungotungamira chete asi mari, DialogTech chikuva chinopa simba kuvashambadzi neiyo yekufona data inodiwa kuti vape mari nechivimbo mumishandirapamwe inotyaira mafoni, pamwe nehunyanzvi hwekushandura hunodiwa kushandura vanodana kuva vatengi. Iyo yekufona yekupihwa uye tekinoroji tekinoroji yakavakirwa zvakanangana nevashambadzi vanoshandira mafoni kune chero nzvimbo uye inogona kushandiswa ne - kana kuzvimiririra zvachose pa - bhizinesi nzvimbo yekufona.
End-to-end yekufona data yekupa: Zvakawanda kwazvo kupfuura kufona kwekutevera. Mhinduro chete inotaurira vashambadziri mashandirapamwe avo ekufambisa mafoni evatengi, kana mafoni achichinjira kukutengesa, uye nei - kuvhara chiuno pakati pedhora rakashandiswa nedhora rakawanikwa.
Real-nguva yekufona tekinoroji tekinoroji: Mhinduro chete yevatengesi yekudzora nzira uye kugadzirisa yega yega yekufona chiitiko munguva chaiyo, kuverengera kuti munhu wese anofona akabatanidzwa ipapo ipapo kune akanakisa munhu kuti avashandure vatengese.
DialogTech ichangoburwa KunobvaTrak ™ 3.0 - yekutanga uye chete yekufona yekuteedzera mhinduro yakagadzirirwa kusangana neiyo data, kugona, kuvimbika uye nyore-kwe-kuita zvinodiwa zvemakambani eFortune 1000, makuru makuru enzvimbo nzvimbo nemasangano ekushambadzira avanoshanda nawo.
Pamusoro peSourceTrak 3.0, DialogTech yakavhura mhinduro dzinotevera muna 2015, ichiwedzera simba Voice360® platform:
SpamSentry ™ Spam Call Kudzivirira: Mhinduro chete muindasitiri yekuteedzera inoshandisa inochinja, michina yekufunda-michina inomisa mafoni ekunyepedzera uye asingadiwe vasati vasvika kukambani yekutengesa yekambani. SpamSentry zvakare inodzivirira spam yekufona data kubva pakuonekwa mune analytics kuti vashambadzi vanovimba nekuyera mashandiro emakampeni ekushambadzira enhare. Makiyi akakosha anosanganisira: Artificial neural network, inoenderana neyatsva spam, uye keypress tekinoroji. Verenga zvimwe pa:
DialogTech yeMobile Kushambadzira: Yekutanga uye chete nzwisisika yekushambadzira mhinduro yekutevera, kutonga, uye kugadzirisa vatengi mafoni kubva kushambadziro yenhare. Mhinduro iyi inopawo vashambadziri neiyo chaiyo yakajeka kiyi-kiyi-yekufona yekupa data yeGoogle kufonera ekuwedzera. Pamwe pamwe nekupihwa kufona, mamwe masimba anosanganisira: Contextual kufona nzira, Kutaurirana Insight kufona kurekodha uye analytics, uye kusanganisa kunosanganisira mushandirapamwe-wakasarudzika wekufona analytics data ine martech uye adtech kunyorera kuvandudza mushandirapamwe.
LeadFlow ™ yePay-Per-Kufona: Iyo yekumberi kufona yekufambisa, kupihwa, uye manejimendi mhinduro yakavakirwa pay-per-kufona mishandirapamwe. LeadFlow inopa vanobatana nevashambadziri vanoita basa rakazara kutonga pamusoro pekutungamira kwefoni kunotumirwa kubva kune yega nzira yekushambadzira, iyo inodaidzwa kuti iverengerwe seyechokwadi inotungamira, uye zvimwe zvakawanda.
Tags: fona analyticskufona chinongedzokufona kutendeukakufona mhedzisirokukosha kwekufonadata yekufonakutendeuka analyticsdialogtechkushambadzira sosi yekufonamhando yekufona
3 Zvikonzero Kutengesa Matimu Anotadza Pasina Ongororo
6 Makomborero eTwitter Yekusimudzira Yako Brand